माओवादीमै फर्कन बादलको बार्गेनिङ ! – hamrosandesh.com
माओवादीमै फर्कन बादलको बार्गेनिङ !
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्रको दल दर्ता खारेजीको माग गर्दै बुधबार निर्वाचन आयोगमा निवेदन परेको छ । माओवादीको दल दर्ताको खारेजीको माग गर्नेहरुमा एमालेको नेताहरु हुन् । उनीहरु पूर्वमाओवादीका नेताहरु हुन् ।
साविक नेकपाताका केपी शर्मा ओली समूहमा रहेका र पछि एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतिएपछि एमालेमै रहेर माओवादी नफर्किएका नेताहरु अहिले माओवादीको वैधानिकता खोजेका हुन् ।
माओवादी त्यागेर रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, लेखराज भट्ट, मणि थापा, गौरीशंकर चौधरीसहितका नेता एमालेमा रहे । एमालेमा गएपछि उनीहरुलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य र राष्ट्रिय सभा सदस्यसहित पार्टीको साधारण सदस्यबाट माओवादीले हटायो । र चुपचाप एमालेमै रहेर बसेका थिए ।
तर, अदालतको आदेशपछि बादल, रायमाझी, साहसहितका नेताहरुको मन्त्री पद खुस्कियो । कुनै पनि लाभको पदमा नरहेको र एमालेभित्र पनि उनीहरु संकुचनको अवस्थामा रहेका भनिएका बेला बुधबार थापा बादल समूहका लीलाबहादुर थापा, दिनेश पन्थी, रामचन्द्र मण्डल, गिरिधरी न्यौपानेसहितका नेताहरुले निर्वाचन आयोग पुगेर माओवादीको दल दर्ता खारेजको माग गर्दै निवेदन दिएका हुन् ।
उनीहरुकाअनुसार माओवादीले २०६९ यता महाधिवेशन नगरेको र २०७३ साउन १३ मा पार्टी एकताका नाममा आयोगलाई झुक्याएको आरोप छ ।
आफू एमालेमा रहेर अरुको पार्टीको वैधानिकता खोज्ने बादलसहितका पूर्वमाओवादी नेताहरुको व्यवहार माओवादीमा फर्कन गरेको बार्गेनिङको रुपमा लिएका छन् ।
प्रत्येक पाँच वर्षमा दलहरुले महाधिवेशन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । एमालेको पछिल्लो महाधिवेशन २०७१ असारमा भएको थियो । एमालेको महाधिवेशन नभएको सात वर्ष भइसकेको छ ।
तर, आफ्नो पार्टी एमालेको वैधानिकता नखोजेर बादलसहितका नेताहरु आफूले छाडेको माओवादीको वैधानिकता खोज्न आयोग पुगेका हुन् । साथै माओवादीले आफूहरुमाथि गरेको कारबाही अवैधानिक रहेको उनीहरुको दाबी छ ।
माओवादीको वैधानिकताभन्दा पनि आफूहरुमाथि गरिएको कारबाही अवैधानिक पुष्टि गरेर माओवादीमा फर्कन खोजेको र यसैका लागि बार्गेनिङ गर्न बादलसहितका नेताहरु आयोग पुगेको माओवादीका नेताहरु बताइरहेका छन् ।
‘अरुको पार्टीको वैधानिकता खोज्नु किन प¥यो बादलहरुलाई ? उहाँहरु त माओवादी छाडेर एमालेमा गएका हुन् नि, एमालेकै वैधानिकता खोजे भइहाल्यो नि’, माओवादीका एक नेताले भने । क्यानाडा नेपाल